Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ်တွင် ကုန်း၊ ရေနှစ်သွယ်သွား ရှုခင်းကြည့်ဘတ်စ်ကား ဝန်ဆောင်မှုစတင်
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ် ချန်ရှားမြို့ရှိ Xiangjiang မြစ်၏ ချန်ရှားအပိုင်းရှိ ရေထဲတွင် မောင်းနှင်သွားလာနေသည့် ကုန်း၊ ရေနှစ်သွယ်သွား ရှုခင်းကြည့်ဘတ်စ်ကားကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)	Social, Education & Health
ချန်ရှား၊ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ် ချန်ရှားမြို့ရှိ Orange Isle ရှုမျှော်ခင်းကြည့်နေရာတွင် ကုန်း၊ ရေ နှစ်သွယ်သွား ရှုခင်းကြည့်ဘတ်စ်ကား ဝန်ဆောင်မှုစတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဘတ်စ်ကားသည် ကုန်းပေါ်နှင့် ရေပြင် နှစ်နေရာလုံး၌ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး ဘတ်စ်ကားစီးရင်း ရှုခင်းကြည့်ရှုရန် လာရောက်လည်ပတ်သူများအား ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ (Xinhua)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ် ချန်ရှားမြို့ရှိ Xiangjiang မြစ်၏ ချန်ရှားအပိုင်းရှိ ရေထဲတွင် မောင်းနှင်သွားလာနေသည့် ကုန်း၊ ရေနှစ်သွယ်သွား ရှုခင်းကြည့်ဘတ်စ်ကားကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ် ချန်ရှားမြို့ရှိ Orange Isle ရှုမျှော်ခင်းကြည့်နေရာတွင် မောင်းနှင်နေသည့် ကုန်း၊ ရေနှစ်သွယ်သွား ရှုခင်းကြည့်ဘတ်စ်ကားကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
Amphibious sightseeing bus starts service in central China's Hunan
Source: Xinhua| 2021-01-16 09:32:29|Editor: huaxia
CHANGSHA, Jan. 16 (Xinhua) -- An amphibious sightseeing bus was put into use at the Orange Isle scenic area in Changsha of central China's Hunan Province. The bus, which can drive both on land and in water, has attracted many tourists to takearide.
1-Aerial photo shows an amphibious sightseeing bus floating in Changsha section of Xiangjiang River in Changsha, central China's Hunan Province, Jan. 15, 2021. (Xinhua/Xue Yuge)
2-An amphibious sightseeing bus drives in Changsha section of Xiangjiang River in Changsha, central China's Hunan Province, Jan. 15, 2021. (Xinhua/Xue Yuge)
3- An amphibious bus drives in Changsha section of Xiangjiang River in Changsha, central China's Hunan Province, Jan. 15, 2021. (Xinhua/Xue Yuge)
4-Aerial photo shows an amphibious sightseeing bus floating in Changsha section of Xiangjiang River in Changsha, central China's Hunan Province, Jan. 15, 2021. (Xinhua/Xue Yuge)
5- An amphibious sightseeing bus drives at the Orange Isle scenic area in Changsha, central China's Hunan Province, Jan. 15, 2021. (Xinhua/Xue Yuge)
Previous Article တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသ စစ်ဆောင်ပန်နားတွင် အဝေးပြေးလမ်းမသစ်တစ်ခု ထပ်တိုးဖွင့်လှစ်
Next Article တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်နယ်ခွဲနှင့်မြို့(၁၆)ခုတွင် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ ဖောက်လုပ်ပြီးစီး